true marriage /zu-ZA/tools-for-life/marriage/steps/the-adventure-of-marriage.html practical 7 7 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/marriage_zu_ZA.jpg Umshado
Thola umbhangqwana oshadayo onobunzima emshadweni wawo. Thola isivumelwano sabo sokwamukela usizo lwakho ukuze baqondise out imishado yabo.
Okokuqala, thola bobabili abalingani bomshado ukuthi bathathe i-Marriage Online Course ukuze baqonde ukuthi yini ebangele ukuthi umshado wabo uchitheke futhi yazi ukuthi yini okudingeka yenziwe ukuze babuye babuyelane futhi.
Siza abalingani bomshado out ukuthi bazi ukuthi yini okudingeka bayenze ukupostuletha umshado futhi bese bewuqala futhi.
Thola bobabili ozakwethu ukuthi bathathe UbuQotho NokweThembeka Online Course futhi babahlalise phansi babhale ama-overts nama-withholds.
Thola bobabili abalingani bomshado ukuthi bathathe Imbangela Yezingxabano Online Course ukuze wazi kanjani ukuthi bangamthola kanjani umuntu obangele noma yikuphi ukulwa abenakho noma angaba nakho esikhathini esizayo.